Ukhenketho lwasekhaya lwase-UK lubekwe ehlotyeni
Ikhaya » Amanqaku eendaba akutshanje » Ukwaphula Iindaba Zamanye Amazwe » Iindaba eziHlumayo zase-UK » Ukhenketho lwasekhaya lwase-UK lubekwe ehlotyeni
Airlines • isikhululo • uhambo ngomoya • Ukwaphula Iindaba zaseYurophu • Iindaba eziziiNdaba zokuHamba • Icandelo lokungenisa izihambi • Iihotele kunye neeholide • iindaba • Ukuhamba ngololiwe • Ukwakha kwakhona • Resorts • Xanduva • Shopping • Tourism • Intetho yezoKhenketho • uthutho • Ukuhlaziya indawo ekuyiwa kuyo • Iimfihlo zohambo • Iindaba zeWired Travel • Iindaba eziHlumayo zase-UK • Iindaba ezahlukeneyo
Emva kweenyanga ezinde, ezibandezelayo zokutshixwa ebusika, uninzi lwebrits luya kuba nesibindi sokubaleka, kwaye ukuhlala emakhaya kuya kuphinda kulawule kulo nyaka.
Imfuno yeholide yasekhaya e-UK ijongeka ngathi iza kukhutshwa
Imfuno yekhaya iya kubuya ngezinga elikhawulezayo kunelamazwe aphesheya
Olona hlolisiso lwakutsha nje luveze ukuba i-43% yabaphenduli iya kuthathela ingqalelo uhambo lwasekhaya kwiinyanga ezili-12 ezizayo
Xa abahambi bemadolw 'anzima kuhambo lwamazwe aphesheya, ibango leholide yasekhaya e-UK libonakala ngathi liza kukhutshwa. Imephu yendlela yokwehlisa ukuthotywa kokutshixa iqhubeka ngesantya kwaye UKabaqhubi basekhaya abasetelwe ukuba baxhamle.
Abaqhubi basekhaya baya kusetwa ihlobo elinzima njengoko ibango lasekhaya liza kubuya ngesantya esikhawulezayo kunemfuno zamanye amazwe. Uqikelelo lwamva nje lweshishini lubonisa ukuba ibango lasekhaya liza kuqhubeka ukunyuka ngo-2021, ngokutyelelwa kuphela kwe-17% kumanqanaba e-2019 - xa kuthelekiswa nokuhamba okuphumayo, ekuqikelelwa ukuba kwehle ngama-47.7% ngo-2019. Ekhaya, kunye nobutyebi bamava ekunikezelweni kwi-UK, kuya kuba negalelo ekuvuseleleni okunamandla kukhenketho lwasekhaya kulo nyaka, ukuxhamla imeko yezemali yeenkampani ezininzi zokhenketho ezikhoyo e-Bhritane.
Olona hlolisiso lwakutsha nje luveze ukuba i-43% yabaphenduli iya kuthathela ingqalelo uhambo lwasekhaya kwiinyanga ezili-12 ezizayo, ngaphezulu kune-30% abangayi kuqaphela ukuhamba konke konke.
Njengomphumo wokungafuni kwabathengi ukuhamba kumazwe aphesheya, abanye abasebenzisi bamazwe aphesheya kunye neearhente banciphisile okanye bayeka ukuthengisa amandla okwangoku. Elunxwemeni landise ixesha lokuthengisa kude ne-30 kaJuni ukuya kwi-31 ka-Agasti, ecacisa ukuba ukungaqiniseki kuphezulu kakhulu. Kwangoko kulo nyaka, i-TUI ikwathathe ezinye zezinto ezilindelweyo, ukunciphisa ukusebenza kwayo kwe-2021 ukusuka kwi-80% ukuya kwi-75% yamanqanaba e-2019, kwakhona ngenxa yamanqanaba aphezulu okungaqiniseki.
Ngabasebenzi ababeke ukubheja kwabo ehlotyeni lemfuno ephezulu yasekhaya kunye nokuhamba kwamazwe aphesheya kubonakala kungaqinisekanga uninzi lwalo nyaka, iholide zasekhaya zijongeka njengokuqhuba ukhenketho eBritane.